Sipheka amadada nama-oranges. I-step-by-step recipe, ezokusiza ukuthi uqonde ukuhlakanipha kokupheka
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Izithako Inyoni Duck
Iresiphi yesinyathelo-nge-step for duck okumnandi nama-oranges.
Esikhathini saseFrance kukhona ukudla okuningi okuphepheni kanye nezitsha ezithakazelisayo, enye yazo eyiqhawe lethu lanamuhla - i-duck egcwele ama-oranges futhi ebhaka kuhhavini. Ukulungiswa kwalo akukwazi ukubizwa ngokuthi kulula, kodwa akunakwenzeka ukufakazela kusigaba "kuphela umpheki angakwazi ukubhekana nalokhu." Into eyinhloko ukuthi okungenani kunesipiliyoni sokubhaka noma yikuphi uhlobo lwezinyoni kuhhavini.
Ungayilungisa kanjani i-marinade nge-oranges? Ukulungiselela ihhavini.
Ngaphambi kokuya ngqo emibhalweni yesinyathelo ngesinyathelo sokupheka amadada nama-oranges, udinga ukuhlunga ama-marinade azokwenza inyama yezinyoni futhi ithambile, ejabulisa bonke abazoba khona emkhosini we "belly" etafuleni lakho.
ijusi orange - kusuka izithelo 1
ijusi kalamula - enezithelo ezingu-1
usawoti - 1 ithisipuni
Umsila omnyama we-Ground - 0,5 tbsp. izinkezo
ingxube yezinongo "ama-provencal" - izipuni ezingu-0.5
Sage omile - 1 ithisipuni;
amafutha omnqumo - 1 tbsp. i-spoonful
Hlanganisa zonke izithako endishini ngokuthuthumela kahle;
Lungisa udada: ususe wonke amafutha emzimbeni ngangokunokwenzeka, udonsa i-viscera, unqume isikhumba eduze kwentamo, unqume amaphiko;
Esikhathini esitsheni esihlukile sibeka le nyoni, sithule i-marinade kuso, vala ipuleti ngokuqinile noma udonse ifilimu yokudla ukuze umoya ungangeni kuwo. Thumela inyama esiqandisini isikhathi esingenani samahora angu-6, futhi kufanele ubusuku bonke. Okungenani izikhathi ezimbalwa ekusetshenzisweni "inyama enesifo" - vula isidumbu kusuka kolunye uhlangothi kuya kwesinye.
Isigaba sokuqala silungiselela, sigcwaliswe. Ngemuva kokukhethwa, ungaqhubeka ngqo ekugxotsheni ama-oranges e-duck bese ubhaka kuhhavini.
Ungayipheka kanjani ama-oranges kuhhavini?
Thola inyoni ephuma efrijini bese uqhubekela phambili esigabeni esilandelayo somsebenzi wokupheka.
duck - cishe 2 kg
isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi - 2 iziqu
iwayini le-dessert - 2 tbsp. izinkezo
uju - 2 tbsp. izinkezo
Sika i-orange zibe izingcezu ezine. Uma udada omkhulu, khona-ke ungathatha u-5-6 tincetu zezithelo;
Izinkukhu ezilungiselelwe futhi ezifakwe emanzini anosawoti zifaka ifomu e-oyile ngaphambilini kanye nezinto nama-oranges nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi;
Lungisa ihhavini ngama-degrees angu-190, faka inyama ngaphakathi bese ubhaka imizuzu engu-90;
Ngemuva kwemizuzu engama-45, vula i-ovini, ukhiphe ijusi kusuka phansi kwesitsha sokubhaka uphinde uthele le nyoni. Phinda inqubo yonke imizuzu engu-15-17 kuze kuphekwe ngokuphelele;
Ngaphambi kokuba udada nama-oranges ubhake, pheka i-sauce, uhlanganise iwayini, uju nebhotela. Lesi sitsha kufanele sishiswe ngomlilo, siphumelele ngamathumba ngokuvuthisa futhi sifeze ukuvumelana kwesiraphu;
Donsa inyoni ehhavini, uyibeke epuleni bese uyivumela iphinde iphele kancane. Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kufanele sisuswe futhi silahlekelwe, asisakwazi ukusetshenziselwa ukuqhubeka, kodwa ama-oranges angasakazwa ezungeze isitsha. Ngokushesha lapho izinga lokushisa liwela kancane - uthele udada ngoshukela-isiraphu yewayini bese ukhonza etafuleni.
Qaphela: qiniseka ukuthi ususa amafutha ngangokunokwenzeka. Kulesi iresiphi, akudingeki, isidlo ngeke siphume, ngoba izithelo zizokwakha umswakama okwanele. Ungakhohlwa ukuphuza isidumbu esinesibhakabhaka ngengilazi yejusi.
Amehlo ayesaba, futhi izandla zenza. Njengoba ubona, akukho lutho olune-oranges olungaphezu kwenkimbinkimbi ku-recipe. Lezi ziqondiso ezisezingeni eliphezulu ngezinyathelo zizosiza ukuhambisa inyama yenkukhu, ukuyihambisa, bese uyibhaka. Ukuma ngaphandle kwejisi le-orange kanye nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kuyonika idoka ukunambitheka okhethekile, ukuyihlanza ngaphakathi. Ngenxa yalokho, ayitholi eyomile futhi izingcezu zenyama zigcwala nje emlonyeni.
Ukuze uthuthukise amakhono akho, bukela ividiyo:
Bhaka kudoti lwehhavini. Iresiphi kanye neseluleko sabaqalayo
Iresiphi yekhalori ephezulu, kodwa idada elinjalo elikhangayo, elibhakwe emkhondweni
Umlando we-actress u-Alena Bondarchuk
Borscht nobhontshisi nenkukhu
I-hiursky inyama pie
Ukwelashwa kwe-enterocolitis ngamakhambi omuntu
Isimo sezulu eMoscow nasesifundazweni saseMoscow ngoFebruwari 2018: izibikezelo ezinembile ze-Hydrometeorological Center
Izitsha ezinhle kanye nokudla okudliwayo konyaka omusha
Ukuhlanzwa kwegazi: ukupheka kwabantu
Ukungezwani komzimba kusuka edayini wezinwele